Novedades de la Geo-Ingeniería – Year In Infraestructure – YII2019 – Geofumadas
Geo-Engineering News - Infrastructure In Year - YII2019
အောက်တိုဘာ၊ 2019 အင်ဂျင်နီယာ, တီထွင်မှု, Microstation-Bentley
ယခုအပတ်ပွဲကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည် အခြေခံအဆောက်အအုံညီလာခံခုနှစ်တွင်တစ်နှစ် - YII 2019, cuyos tema principal se centra en el avance hacia lo digital con enfoque de gemelos digitales. El evento es promovido por Bentley Systems y aliados estratégicos Microsoft, Topcon, Atos y Siemens; que en una alianza interesante en lugar de simplemente compartir acciones han apostado por presentar soluciones de valor agregado en conjunto en el marco de las tendencias de la cuarta revolución industrial aplicadaala geo-ingeniería, principalmente en las áreas de ingeniería, construcción, producción industrial y gestión de ciudades digitales.
Personalmente, después de 11 años de participar de manera intermitente como prensa o jurado en este evento, los foros de la industria han sido de lo que más valoro. No porque se aprenda algo nuevo en específico, sino porque este intercambio permite ver hacia dónde están caminando las cosas. Nada que no esté sucediendo en otras industrias, pero básicamente este año se ve marcado una orientaciónalos procesos y el ciudadano como centro de atención; no sería extraño que todas las herramientas informáticas de esta empresa se simplifiquenaestos temas, sobre una plataforma de modeladoeinteroperabilidad compartida.
ဒီဂျစ်တယ်မြို့များ: Este año éste es mi preferido, que apuesta por dar un revés directoala competencia diciendo que los activos en la ciudad van más allá del GIS + BIM. La propuesta de valor está en presentar sistemas conectados y flujos integrados en lugar de múltiples soluciones, alineado con la agrupación de portafolios que hemos visto el último año y las nuevas adquisiciones que en lugar de pensar en la integración de modelos de gestión de datos de ingeniería y lo geoespacial, buscan simplificar el modelado de las ciudades desde una óptica holística, pensada en procesos integrales de lo que la gente ocupa gestionar en una ciudad: planeación, ingeniería, construcción y operación.
စွမ်းအင်နှင့်ရေစနစ်များ: Este foro está centrado en los retos por los comportamientos de consumo de recursos y la preparación de condiciones para sustentar el crecimiento de la demanda. La apuesta de valor está en como se pueden tomar mejores decisionesapartir de gestión holística de redes de distribución, abastecimiento mediante gestión automatizada.
မီးရထားနှင့်အကူးအပြောင်း: လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ဘဝသံသရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ တိုးချဲ့ခြင်းတို့အတွက်အလိုအလျောက်ဆောက်လုပ်ရေးယန္တရားများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက်ချက်ချင်းသတင်းအချက်အလက်များ၊ သွင်းအားစုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းတို့ကိုဤတွင်ဆွေးနွေးမည်။
ကျောင်းပရဝုဏ်နှင့်အဆောက်အ ဦး များ Este foro busca discutir y plantear el reto por la simulación de tiempos y movimientos de las personas. Adicionalmente, cómo la gestión digital pude llevaratransformaciones de las soluciones de movilidad urbana.
လမ်းများနှင့်တံတားများ ဒီဟာကဒီဂျစ်တယ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏ယန္တရားများကို အသုံးပြု၍ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲပုံကိုပြသပါလိမ့်မည်။
စက်မှုအခြေခံအဆောက်အ ဦး များ ဤသည်သည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီမံကိန်းများလည်ပတ်ရန်အတွက် PlantSight ၏ဖြေရှင်းချက်များ၌ရင့်ကျက်သောရင့်ကျက်သောဆွေးနွေးခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ha sido una enseñanza magistral la forma cómo una empresa que era de control familiar, en lugar de irseacotizarala bolsa se propuso potenciar sus activos para llevar su ingenio hacia la siguiente revolución de la industria, de la mano de empresas líderes en la ingeniería (Topcon), operación (Siemens) y conectividad (Microsoft). En años recientes vimos lo que será ProjectWise con el alcance de la red Azure, así como PlantSight hacia todo el mercado de la producción industrial.
Este año, la sorpresa no ha sido menor, con la empresa de operación conjunta Bentley Systems – Topcon, enfocada en la la creación de nuevos métodos de construcción basado en la tecnología y simplificación de procesos. Esta solución no salió de la manga de la camisa, sino que es un resultado de más de un año de investigación y colaboración de más de 80 participantes entre organizaciones gubernamentales, empresas privadas y profesionales que ya venían usando soluciones informáticas, equipos, procedimientos y buenas prácticas en el ciclo de vida de grandes proyectos de infraestructura. Esto se gestionó por medio de ဆောက်လုပ်ရေးအကယ်ဒမီနှင့်ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် ဒီဂျစ်တယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း DCW
ဒီဂျစ်တယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း, ၄ င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုစတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရောက်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္inတွင်ကုမ္ပဏီများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့နှင့် တွဲဖက်၍ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်သည် ၏ DCW, အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက်စနစ်နှင့်အမြွှာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။
ဒီ Symbosis ဟာဖောက်သည် - ကုမ္ပဏီအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ Bentley y Topcon,asu vez buscarán la priorización de sus inversiones en cuantoamejoramiento y re-diseño de de software de ingeniería de construcción. No lo pudo decir mejor Greg Bentley, CEO de Bentley Systems:
“ Topcon နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရင်းအနှီးတွေပေးအပ်ဖို့နောက်ဆုံးမှာစက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ Constructioneering ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသီးသီးကတိပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအသစ်များသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာများတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အခြေခံအဆောက်အ ဦး ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်လာခြင်းသည်လူနှင့်ဆောက်လုပ်သူများ၏ဖြစ်စဉ်များသည်နည်းပညာ၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှင့် Topcon သည်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်သူများကိုလိုအပ်သလိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါင်းစည်းမှုတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်ပခုံးချင်းပခုံးချင်းချိတ်ဆက်ရန်၊ ဒီဂျစ်တယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖက်စပ်ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံး၏အပြည့်အ ၀ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အရင်းအနှီးကတိက ၀ တ်များရှိပြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်အလားအလာကောင်းများကိုကမ္ဘာ့အခြေခံအဆောက်အအုံကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်ကူညီသည်။
El concepto Gemelo Digital viene del siglo pasado, y aunque podrían haberlo resucitado como una moda pasajera, el hecho que líderes de la industria de con esta influencia en la tecnología y mercado lo muevan de nuevo, garantiza que será una tendencia irreversible. Digital Twin es muy parecido al nivel3de la metodología BIM pero ahora tal parece que serán los Gemini အခြေခံမူ ကြောင်းလမ်းကြောင်းလိုင်း mark လိမ့်မယ်
Microsoft 365 နှင့် SaaS-based နည်းပညာကိုအသုံးပြုသော ProjectWise 365 update တွင် web-based ၀ န်ဆောင်မှုများ - cloud နှင့် BIM အချက်အလက်အသုံးပြုမှုကိုတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး၊ iTwin ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်တည်းဖြတ်မှုအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဆင့်အားလုံးမှာ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်အရဆိုလျှင် ProjectWise 365 နှင့်အတူစီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုစီမံနိုင်သည် (စတိုးဒီဇိုင်းများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာဖလှယ်ခြင်း) ။
အသုံးပြုသူများ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ - စီမံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် 2D နှင့် 3D အမြင်များအကြားသွားလာနိုင်ရန် iTwin Design Review ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုစီမံကိန်းအတွက်ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုမည့်သူများ၊ သူတို့၏ ProjectWise ပေါင်းစည်းမှုဖြင့်စီမံကိန်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာများကို ပြောင်းလဲ၍ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်သည်ကိုခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် 2019 ရရှိနိုင်ပါသည်။
“ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာများသည်ဤကြေငြာချက်များ၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ cloud service အသစ်များနှင့်အတူရှေ့သို့တိုးတက်နေသည်။ ARC စျေးကွက်လေ့လာမှုအသစ်အရ ProjectWise အသုံးပြုသူများ BIM နံပါတ် 1 ပူးပေါင်းဆော့ဝဲလ်သည် Bentley ကို Azure ၏အကြီးဆုံး ISV သုံးစွဲသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ProjectWise 365 ဝက်ဘ်အခြေပြုလက်ငင်း - cloud ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ဒီဇိုင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်နှင့် iTwin cloud ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်စေရန်။ နှင့် cloud ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် SYNCHRO ၏လက်လှမ်းမမီကိုတိုးချဲ့။ အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများဖြန့်ဝေခြင်းသည်အချိန်နှင့်နေရာပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ Bentley ၏ 4D ဒီဂျစ်တယ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စီမံကိန်းအမွှာများသည်အခြေခံအဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာအတွက်ဒီဂျစ်တယ်တိုးတက်မှုကိုမောင်းနှင်နေပါသည်။ » Noah Eckhouse၊ Bentley Systems စီမံကိန်းအတွက်အကြီးအကဲဒုဥက္ကpresident္ဌဖြစ်သည်
cloud service များအတွက်သည် Synchro Bentley Systems အသုံးပြုသူများသည်စီမံကိန်းများ၊ ကွင်းပြင်ရှိသို့မဟုတ်ရုံးတွင်းရှိဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စီမံခန့်ခွဲရန်မော်ဒယ်များအပြင်အလုပ်များ၊ မော်ဒယ်များနှင့်မြေပုံများပင်၏အမြင်များကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးဖြစ်ပျက်မှုအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဖြစ်ပွားမှုအချို့ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအရ Microsoft ၏ Hololens2နှင့်အတူတိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်စီမံကိန်းဒီဇိုင်းများ၏ 4D အမြင်များကိုဆိုလိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာများ၏ 4D မြင်ကွင်း။
Global Mobility Simulation Software (CUBE) ကဲ့သို့သောနည်းပညာများသည် Bentley Systems မိသားစုနှင့်ပူးပေါင်းသည် - Citilabs, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (Streetlytics), နှင့် geospatial ဒေတာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြား, ဘယ်လ်ဂျီယံပံ့ပိုးပေး Orbit Geospatial Technolgies မှ Orbit GT - 3D မြေပုံဆော့ဖ်ဝဲ, 4D မြေမျက်နှာသွင်ပြင်, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအားဖြင့်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းကမ်းလှမ်း။
ဤရွေ့ကားဝယ်ယူမှုမြို့ပြဒစ်ဂျစ်တယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတိုးတက်နိုင်သည့်နှင့်အတူပေါင်းစည်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြို့များမှမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များမှတစ်ဆင့်အချက်အလက်များကိုရယူခြင်း၊ 4D - Orbit GT- မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကို အခြေခံ၍ Open Roads - Bentley ကဲ့သို့လျှောက်လွှာများတွင်အချက်အလက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် CUBE နှင့် Simulator များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လက်ရှိလမ်းပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက်များစုစည်းရရှိခြင်း အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလုပ်သောနှင့်အတူတည်ဆောက်ခံရ။
လက်တွေ့အားဖြင့်ဤကိရိယာများဖြင့်လက်တွေ့ပုံစံကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အ ဦ များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်။ ၎င်းသည်ဤဝယ်ယူမှု၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြစ်မှန်မှဒေတာအားလုံးကိုရယူပြီးနောက် Bentley cloud service နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားသူများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာများအားအတည်ပြုခြင်းဖြင့်ဤအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။
« Bentley Systems ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် multimodal သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏စီမံကိန်း၊ ဒီဇိုင်းနှင့်လည်ပတ်မှုကိုအပြည့်အဝပေါင်းစည်းရန်စိတ်ကူးကောင်းသောအခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည်။ Citilabs သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအားကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကြီးများ၊ ဒေသများနှင့်တိုင်းပြည်များတွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုနားလည်ရန်နှင့်ခန့်မှန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့်တည်နေရာအခြေခံအချက်အလက်များ၊ နှင့်မနက်ဖြန်၏ရွေ့ပြောင်းမှုစနစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်လည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်စီစဉ်ထားသည်။ Michael Clarke၊ Citilabs ၏ဥက္ကpresident္ဌနှင့်စီအီးအို
En definitiva, nos espera una interesante semana. Publicaremos nuevos artículos en los siguientes días.
Bentley Systems က
ယခင် Post မှ« Previous Geo-Engineering Concept ကိုပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်း
Next Post ဒီဇိုင်းပေါင်းစည်းမှု - Digital Twins မှတစ်ဆင့်အဆင့်မြင့် BIM တစ်ခုအတွက်ကတိကဝတ်နောက်တစ်ခု»